ဒီနေ့မနက် ခရီးရှည်ထွက်စရာရှိတယ်။ လိုက်မည့်သူကလည်း မိသားစုဝင်အားလုံး။ သိပ်တော့မများပါဘူး။ အဖေရယ်၊ အမေရယ်၊ အဖိုးအဖွားနဲ့ မြေးကလေး၊ စုစုပေါင်းမှ ၅ ယောက်တည်းပါ။ အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကားကလည်း လူ ၅ ယောက် ကောင်းကောင်းစီးလို့ရတဲ့ကား။ ဒါပေမဲ့ တက်နေတဲ့ပြဿနာက နှစ်ခု။ ပထမတစ်ခုက သက်သောင့်သက်သာဖြစ်ပေမဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်မဖြစ်တာဘဲ။ အရှေ့ခုံမှာ ထိုင်ကြမည့် အဖေနဲ့အမေအတွက်က အဆင်ပြေပေမဲ့ အနောက်ခုံကလိုက်မည့် အသက်ကြီးအရွယ်ကြီး အဖိုးနဲ့အဖွား ခြေဆန့်လက်ဆန့် နေနိုင်ဖို့ရယ်၊ အမြဲတမ်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆော့ကစားတတ်တဲ့ မြေးကလေးအတွက် နေရာကျယ်ကျယ်ရယ် ရနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ ဒုတိယတစ်ခုကတော့ အိတ်တွေ၊ အထုတ်တွေ၊ အပိုးတွေအတွက်ပါ။ လူ ၅ ယောက်အတွက် အဝတ်အစားအထုတ်အပိုးအပြင်ကိုမှ ခရီးမှာ ကိုယ်ဝါသနာပါရာ ကိုယ်လုပ်ဖို့အတွက် တန်ဆာပလာတွေကလည်း ထည့်သယ်သွားမှ ပိုကောင်းမှာလေ။ လောလောဆယ်တော့ ရှိနေတဲ့ကားလေးနဲ့ ဝင်ဆံ့တဲ့ အဝတ်အစားအိတ်တွေပဲ သယ်သွားရတော့မည့်ပုံဖြစ်နေပြီ။
အနည်းဆုံး မိသားစု ၅ ယောက်နဲ့အတူ ယူသွားလိုတဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယအစုံအလင်နဲ့ လိုရာခရီးအရောက်ပို့ပေးနိုင်မည့် ကားတစ်စီးလောက် ပြောင်းစီးဦးမှပါပဲ။ ဘယ်လိုကားမျိုးပြောင်းရမလဲ?
ရန်ကုန်မြို့ကြီး ရေမကြီးတော့ဘူးလို့ ပြောပြောနေတာ ကြားဖူးပါရဲ့။ လုံးဝရေမကြီးအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ တကယ်ကိုမလွယ်တဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခုပါ။ Bodybuilding လုပ်သလိုမျိုးနဲ့အလားသဏ္ဌာန်တူတယ် ထင်တာပဲ။ အခုရေတွင်းတူး၊ အခုရေကြည်သောက်ချင်လို့တော့ ဘယ်ရပါ့မလဲ။6Packs ဖြစ်ဖို့ကိုတောင်မှ လနဲ့ချီပြီးအချိန်ယူရတာ။ နှစ်ပေါင်းများစွာယိုယွင်းခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးရေမကြီးဖို့ဆိုတာ နှစ်အနည်းငယ်နဲ့တော့ ဘယ်လွယ်မှာလဲနော်။
တစ်ခုရှိတာက ရန်ကုန်မြို့ကြီးရေများကြီးရင်ဖြင့် လမ်းလျှောက်တဲ့သူတွေရော၊ ကားစီးတဲ့သူတွေပါ အားလုံး ဒုက္ခရောက်တော့တာပါပဲ။ တစ်ခါတလေများ ရေကြီးပုံက တံခါးကြားထဲကရေတွေ cabin ထဲအထိရောက်တဲ့အထိကို ကြီးတတ်တာမျိုး။ အောက်က ရာဘာခြေနင်းပြားတွေ ပေါလောပေါ်လာမှ “ဟ! ကားထဲကိုရေတွေဝင်လာပြီ” ဆိုပြီး လန့်ပြီးသွားတတ်တဲ့အထိပါပဲ။ အဲဒီလိုအခြေအနေရောက်ပြီဆိုရင်တော့ ကားမောင်းသူတိုင်းလိုလို နဖူးကြောတွေထောင်နေပါပြီ။ ရေနဲ့အင်ဂျင်ဆိုတာမျိုးက radiator နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုပြောပြော သဟဇာတကိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ အခုလိုမိုးကောင်းတဲ့အချိန် ရန်ကုန်ရေပြင်ကျယ်ကြီးကို ဇိမ်ကလေးနဲ့ ဖြတ်သန်းဖို့အတွက် ဘယ်လိုကားမျိုးပြောင်းစီးသင့်သလဲ?
ဟိုတစ်နေ့က Redline မှာတင်တဲ့ Lexus LC500 ကလေးကို စိတ်ကူးထဲမှာစီးကြည့်တယ်။ စီးလို့ကောင်းတယ်၊ ဇိမ်ကျတယ်။ အရှိန်ကလည်း တင်လို့ ကောင်းသလားမမေးနဲ့။ လီဗာကိုတစ်ချက်ဖိလိုက်တာနဲ့ မြန်နှုန်းက “ဝူး” ကနဲတက်သွားတယ်လေ။ စိတ်ကူးထဲမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ကူးထဲကိုတောင် တက်စောင့်တဲ့အသံက “ဒုံး” ကနဲပဲ။ တစ်ချက်တောင်မဟုတ်ဘူး။ နှစ်ချက်။ “ဒုံး”…. ဆိုပြီး လူက ခုံပေါ်ကနေ နည်းနည်းမြောက်သွားတယ်။ ပြီးမှ နောက်ထပ် တစ် “ဒုံး”။ ဒီ “ဒုံး” ကတော့ ပထမအချက်လောက်မပြင်းတော့ပါဘူး။ ဘရိတ်တွေဘာတွေ ကြောက်လန့်ပြီး ကန်လိုက်မိပြီကို။ “ဒုံး… ဒုံး” ထက်ဆိုးတဲ့ အသံတစ်ခုရှိနေပါသေးတယ်။ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ “ဂျစ်” တဲ့။ ကားဗိုက်နဲ့ slowdown ပွတ်တိုက်တဲ့အသံ။ တယုတယထားစီးနေတဲ့ကား ဆိုလို့တော့ကလား၊ အသည်းနှလုံးကို ကော်ပတ်ကြမ်းနဲ့ပွတ်တဲ့အသံမျိုးလို ဖြစ်နေတော့တာ။
Slowdown တုံးတွေဆိုတာမျိုးက မထားသင့်ဘူးလို့ မငြင်းလိုပါဘူး။ ထားသင့်ပါတယ်။ ခက်နေတာက သတိပြုဖို့ခြယ်ထားတဲ့ အဝါလိုင်းတွေက slowdown တိုင်းမှာရှိမနေတာပါ။ တချို့ဟာတွေက ဆေးပျက်သွားတာတွေ။
နောက် တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် လမ်းအနိမ့်အမြင့် ဆိုးဆိုးရွားရွားမညီတာ။ ချိုင့်တွေ ကျင်းတွေပေါတာ။ တချို့ချိုင့်များဆိုရင် ကားဘီးတစ်ဝက်လောက်အထိကို နက်နေတတ်တာမျိုး။ ရှိပြီးသားချိုင့်ကိုမှ ကားကြီးတွေက ယက်ယက်သွားလို့ ပိုပိုနက်သွားရတဲ့ ချိုင့်မျိုးတွေလေ။ ဒီလိုမျိုး အတားအဆီးတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး လိုရာအရပ် အမြန်ရောက်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုကားအမျိုးအစားဝယ်စီးရမလဲ?
မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာ သီးသန့်ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ sport ၊ sedan ၊ hatchback ၊ pickup truck စသည်ဖြင့် အမျိုးအစားမျိုးစုံ ထုတ်လုပ်ရောင်းလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီလို စုံလင်လှတဲ့အမျိုးအစားတွေထဲကမှ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အသုံးတည့်မည့်၊ နေရာလွတ်များများရနိုင်မည့်၊ လမ်းအခြေအနေအမျာအပြားမှာ သင့်လျော်တဲ့ SUV ကတော့ ဒီဘက်ခေတ် နိုင်ငံတကာအဆင့် မော်တော်ယာဉ်လောကမှာကို လူကြိုက်များလှတဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်လာပါတယ်။ တခြားမကြည့်နဲ့။ တစ်လျှောက်လုံး မြန်နှုန်းမြင့်ကားတွေ၊ အလန်းစားဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ကမ္ဘာကျော်နေတဲ့ Lamborghini တောင်မှ Urus ဆိုပြီး SUV ထုတ်လုပ်လာတဲ့အထိပါပဲ။
ဒါဆိုရင် အဖြေထွက်ပြီလားဆိုတော့ ထွက်တော့ထွက်ပြီ။ ပြည့်စုံမှုတော့မရှိသေးပါဘူး။ SUV ထဲကမှ ဘာ brand ကိုဝယ်ရမလဲ? ဥပမာပေးရရင်
BMW ရဲ့ X1 တို့ X2 တို့လား?
Volvo ရဲ့ XC40 ၊ XC60 ၊ XC90 တို့ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲ?
Toyota ကဆိုရင်ရော? Rush လား Fortuner လား?
JLR ရဲ့ Jaguar F Pace တို့ Land Rover Discovery အသစ်တို့၊ သိပ်မကြာသေးခင်ကမှ မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Range Rover Evoque အသစ်တို့ဆိုရင်ရော?
ကိုရီးယား brand Hyundai ရဲ့ Creta တို့ Tuscon တို့ဆိုရင်အဆင်ပြေမလား?
တရုတ် brand GAC ရဲ့ GS5 ၊ GS7 နဲ့ GS8 တို့လား?
ဘယ်လို SUV ကိုရွေးရမလဲ။ ခေါင်းရှုပ်နေမယ့်အစား SUV show တစ်ခုကိုသွားပြီး အားလုံးကို ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်မောင်းနှင်ကြည့်လိုက်တာက ပိုကောင်းတာပေါ့။
လာမည့် သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နဲ့ ၁၁ ရက်နေ့တွေမှာ CarsDB ကဦးစီးပြီး အပေါ်ကပြောတဲ့ brands တွေအကုန်ပါတဲ့ CarsDB SUV show 2019 ရှိပါတယ်။ SUV တွေ ပြသရောင်းချတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုမှ ကြိုက်တဲ့ကားကို စမ်းမောင်းကြည့်လို့ရတာမို့လို့ အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေမှာပါ။